Bible Study | Small Steps
मानिसहरूलाई हृदयमा राख्दा हामीलाई प्रार्थना गर्न हतार लाग्छ र प्रार्थना गर्नेहरूले असल सम्बन्ध स्थापना गर्छ अनि असल सम्बन्धमा जिउनेहरू खुशी भएर जिउँछन्। तपाई असारको हिलोमा गाउँदै रम्न सक्नुहुन्छ या सिरकको तातो भित्र सुतेर रुन पनि सक्नुहुन्छ। कति धेरै धनी श्रीमान, श्रीमतिहरू बेखुशी भेटिन्छ साथै धुप्रै मुनामदनहरू पनि भेटिन्छ। किनकि खुशीको जग असल सम्बन्ध होः नाम, […]
Bible Study, Discipleship, Thoelogy church, ndlama, Nepal
यो पतित संसारमा लोभी हुन कसैलाई सिकाउँन पर्दैन। यो त मानिसको स्वभाविक चरित्र हो। संसारका सबै मानिस बढी पाउन अनि सम्पन्न बन्न दौडी रहेका छन् र क्रूसमा झुन्डिएको येशूका दासहरूले समृद्धि, चंगाइको भरमा सेवा गर्न खोजे ती मानिसहरूले येशूको वलिदानलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न चुक्छन्। जसरी दाइजो हेरेर विवाह गर्ने श्रीमानले आफ्नो श्रीमतिलाई माया गर्न चुक्छ […]
Bible Study, Discipleship, Thoelogy
के तपाई अचारको भरमा त जिउँदै हुनुहन्न?
जीवन जिउन खानाको जरुरी छ भन्ने कुरा कसैलाई बुझाइ राख्नुपर्दैन। अनि खानालाई सजिलै लिन अचारले राम्रो भूमिका खेल्छ। अचारले तपाईलाई दुई चार गास बढी खान पनि मद्दत मिल्छ, तर मानौ कुनै व्यक्तिले अचारलाई नै भात सम्झे कस्तो होला? के कुनै मानिस अचारको भरमा मात्र बाच्न सक्ला? त्यसरी नै ख्रीष्टियनहरूको आत्मिकी भोजन वचन अध्ययन हो। यसलाई […]
दातको सुरक्षाले मुस्कान सत्यको सुरक्षाले स्वतन्त्रता
आदरणीय पास्टर अगुवाहरू तथा ख्रीष्टका जनहरू तपाईले आफ्नो दातको सुरक्षा गर्नुभएन भने तपाईको हासो वा मुस्कान गुम्छ त्यसरी नै सत्यको सुरक्षा गर्नुभएन भने तपाईको स्वतन्त्रता गुम्छ। सत्यलाई जोगाइ राख्नकोलागि मेरो चर्चमा (आशा चर्च, लुइभील केन्टुक्की) आजदेखि (अगस्ट ४) एउटा अध्ययन श्रेणी सुरू हुन लागेको छ। जसलाई टेवा पुराउन ती पाठहरूको छोटो भिडियोहरू पनि तयार पारिने […]
आदरणीय पाठकहरू तपाईको बाइबल मनन र अध्ययनको म हृदयदेखि कदर गर्दछु। तपाईहरू त मलाई बेरियाको मण्डलीको विश्वासी जस्तो लाग्छ, जसले “पूरा उत्‍सुकतासाथ वचन ग्रहण गरे, र ती कुराहरू ठीकै त्‍यस्‍तै हुन्‌ कि होइनन्‌ भनी दिनहुँ धर्मशास्‍त्र छानबिन गर्थे।” (प्रेरित १७:११)। यो लेख लेख्नको कारणचाहिँ, कति धेरै मानिसहरू विश्वासमा कदम चाल्छन अनि शंकामा जीवन जिउँछन्। कति […]
Bible Study, Discipleship, Evangelism, Thoelogy
भरपूर ज्योतिका पाठहरू अब भिडियोमा
भरपूर ज्योतिको अध्ययनलाई मजबुत बनाउँन २० वटा छोटो दृष्य सामाग्रीहरू तयार पारिदैछ। केही तयारी भिडियोहरू हेर्नुभइ तपाईको अमुल्य सल्लाह र सुझाव दिनुहुन अनुरोध छ। १. बाइबल कस्तो छ? What is the Bible like? २. बाइबल कसरी प्रयोग गर्ने How to use the Bible ३. बाइबल कसरी लेखियो How the Bible was written ४. बाइबलको सत्यता […]
Bible Study, Thoelogy
अन्धो इर्स्यालाई हृदयबाट उखेल्नुपर्छ- भाग २
“हामी असल कामहरूका निम्‍ति ख्रीष्‍ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सीप हौं। हामी तीबमोजिम हिँड़ौं भन्‍ने हेतुले परमेश्‍वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो।” एफिसी २:१०। तपाई परमेश्वरको अदुभूत सृष्टि हो र अर्थपूर्ण जीवन परमेश्वरको चाहँना हो। तर यो जीवन जिउनलाई इर्स्याले कसरी बाधा पुराउँछ भन्ने विषयमा हामीले भाग १ मा हेरेका थियौँ। हाम्रो जीवनमा भएको […]
Bible Study, Discipleship, Thoelogy, Uncategorized
अन्धो इर्स्यालाई हृदयबाट उखेल्नुपर्छ – भाग १
“उहाँको सामुन्‍ने पवित्र र निष्‍कलङ्क होऔं भनेर संसारको उत्‍पत्तिभन्‍दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्‍नुभयो। उहाँको इच्‍छाको लक्ष्यअनुसार ख्रीष्‍ट येशूद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्‍ना सन्‍तान हुनलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको थियो।” एफिसी १:४-५ “हामी असल कामहरूका निम्‍ति ख्रीष्‍ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सीप हौं। हामी तीबमोजिम हिँड़ौं भन्‍ने हेतुले परमेश्‍वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो।” एफिसी २:१० […]
Bible Study, Discipleship, Thoelogy Envy, Life
समझदार मानिसको बुद्धिले त्यसलाई सही बाटो दिन्छ। हितोपदेश १४:८ आज धेरै मानिसहरूले धेरै असल कामहरू सुरु गर्छन् तर सन्तोसजनक अन्त गर्न चुक्छन् किनकि ती असल कार्यमा आउने बाधाहरूको बारेमा तिनीहरूले विचार नै गर्दैनन्। तर बाइबलले भन्छ समझदार मानिसले निरन्तर अघि हेर्छ र सही बाटो देख्छ। त्यसैले प्रियहरू, आउने दश वर्षमा परमेश्वरले तपाईको जीवनमा के गरेको […]
रीस पोख्नु अघि सोच्नुहोस्
मूर्खले आफ्‍नो रीस पूरै पोखिन दिन्‍छ, तर बुद्धिमान्‌ मानिसले आफूलाई अधीनमा राख्‍छ। हितोपदेश २९:११ तपाईलाई रीस उठ्यो भने झट्टै रीसलाई खन्याइ हाल्नु हुँदैन। रीसलाई केही समय थाम्नु रीस नियण्त्रणको असल साधन हो। बाइबलले भन्छ, घाम अस्ताउन अघि तिम्रो रीस मरोस्। त्यसैले रीसलाई लामो समयसम्म पालेर राख्नु पनि हुँदैन। तर रीसलाई कम्तिमा पनि पाँच मिनेटसम्म थाम्नु […]
Bible Study, Discipleship Anger, Theology